Delicious - Wonder Wedding 32.108 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 32.108 လြန္ခဲ့ေသာ6လက
ဂိမ္းမ်ား ပံုမွန္ Delicious - Wonder Wedding
Delicious - Wonder Wedding ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
The exciting new chapter in the captivating time management series is available for your Android phone and tablet. Help Emily through various trials and tribulations as her big wedding day approaches!
Find out as you follow Emily on this amazing romantic adventure. Enjoy all-new hijinks and cliffhangers as you work your way through wonderful locations; Invite Emily's friends to the wedding by completing fun challenges; Enjoyahost of new events and upgrades. A rollercoaster of love, laughs, and excitement, it's certain to keep you cheering until the very end.
- Four complete levels
- Available in 8 languages
- Hours of fun time management gameplay with 25 achievements in all.
- Invite all of Emily’s friends to her wedding by completing the Invitation Challenge
- Delicious – Emily’s Honeymoon
-Delicious - Emily's True Love
-Delicious - Emily's Taste of Fame
ထို captivati​​ng အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုစီးရီးအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအသစ်အခနျးသင့်ရဲ့ Android ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သူမ၏ကြီးမားသောလက်ထပ်တဲ့နေ့ကချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းခြင်းနှင့်ဆငျးရဲဒုက်ခမှတစ်ဆင့် Emily ကိုကူညီပါ!
"ဒီဂိမ်းကိုဒေါင်းလုဒ်တစ်ဦးမျှမအကြွင်းမဲ့အာဏာ brainer ဖြစ်ပါတယ်။ " - itouchapps.net
သင်သည်ဤအံ့သြဖွယ်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောစွန့်စားမှုအပေါ် Emily အတိုင်းလိုက်နာအဖြစ်ထွက်ရှာပါ။ သင်အံ့သြဖွယ်တည်နေရာအားဖြင့်သင်တို့၏လမ်းအလုပ်လုပ်အဖြစ် All-အသစ် hijinks နှင့် cliffhangers ခံစားကြည့်ပါ, ပျော်စရာစိန်ခေါ်မှုများဖြည့်ခြင်းအားဖြင့်မင်္ဂလာဆောင်မှ Emily ရဲ့မိတ်ဆွေများ Invite; အသစ်အဖြစ်အပျက်များနှင့်အဆင့်မြှင့်တင်တဲ့အိမ်ရှင်ပျော်ရွှင်ပါ။ တစ်ဦးမေတ္တာကို၏ rollercoaster, ရယ်တတ်, စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အတူကအရမ်းအကုန်အထိအော်ဟစ်ပြီးအားပေးသင်စောင့်ရှောက်စေခြင်းအချို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဂိမ်းကို unlock ဆိုတဲ့အတွက်တစ်ဦးနှင့်အတူရုံးတင်စစ်ဆေးဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်သတိပြုပါ။
*** အခမဲ့ဗားရှင်း *** Features
- Available 8 ဘာသာဖြင့်
*** အပြည့်အဝ Unlocked ဗားရှင်း *** Features
- အားလုံးအတွက် 25 အောင်မြင်မှုများနှင့်အတူပျော်ရွှင်စရာအချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုဂိမ်း၏နာရီ။
- အဖိတ်ကြားလွှာ Challenge ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်သူမ၏မင်္ဂလာဆောင်မှ Emily ရဲ့မိတ်ဆွေအားလုံး Invite
ယနေ့ Download နဲ့ကစား!
GameHouse မှ ပို. apps များ:
- Delicious - Emily ရဲ့ပျားရည်ဆမ်းခရီး
-Delicious - Emily ရဲ့စစ်မှန်သောအချစ်
-Delicious - Fame ၏ Emily ရဲ့ညျးစမျး
-Sally ရဲ့အလှပြင်ဆိုင်ဇိမ်ခံကား Edition ကို
Delicious - Wonder Wedding အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Delicious - Wonder Wedding အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Delicious - Wonder Wedding အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Delicious - Wonder Wedding အား အခ်က္ျပပါ
appsmag စတိုး 9.69k 1.99M
Delicious - Wonder Wedding ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
ေနာက္ထပ္ ပံုမွန္ အက္ပ္မ်ားကို ၾကည့္မည္
APK အေၾကာင္း Delicious - Wonder Wedding အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 32.108
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.gamehouseoriginalstories.com/static/privacy-policy.html
App Name: Delicious - Wonder Wedding
File Size: 207.82MB
Release date: 2019-01-01 13:17:08
လက်မှတ် SHA1: 59:C9:9D:3A:92:CC:74:48:5F:99:BD:59:04:D7:17:AC:47:CF:09:5D
ထုတ်လုပ်သူ (CN): David Hoppe
အဖွဲ့အစည်း (O): GameHouse
နယ်မြေ (L): Seattle
Delicious - Wonder Wedding APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ